Cuntooyinka Jarmalka ee caadiga ah | Wararka Safarka
Jarmalku waa waddan federaal ah oo leh taariikh qarniyo badan, markaa cuntadiisu waxay muujinaysaa safarkan dhaqameed. Ma ahan mid caan ah sida Faransiiska, Talyaaniga ama Isbaanishka, laakiin runtu waxay tahay in ay leedahay cuntooyin taxane ah oo haddii aad safar gasho aad tijaabiso.
Xusuusnow in aagga uu Jarmalku ku yaal uu yahay mid qani ku ah dhaqanka, deriskiisuna waxay ku biiriyeen qaybo ka mid ah qaabaynta gastronomy-ga casriga ah ee Jarmalka. Haddaba maanta, suxuunta Jarmalka caadiga ah.
1 In ka badan bolse iyo biir
7 sausages Jarmal
In ka badan bolse iyo biir
Waxa ugu horreeya ee maskaxda ku haya marka aan ka hadalno cunnooyinka Jarmalka waa labadan walxood, laakiin sida cad gastronomy Jarmal waa wax badan. Runtii, sooyaalka cunnada ee waddanku soo maray waxay xidhiidh la leedahay xididdada iyo juqraafiga. Cunnada Jarmalku waxay horumarisay qarniyo badan waxayna gacanta ku haysay isbeddel bulsho iyo siyaasadeed, haddaba maanta gobol kasta oo dalka ka mid ah waxa uu leeyahay cunto gaar ah iyo dhadhankiisa gaarka ah.
Tusaale ahaan, koonfurta dalka waxaa lagu yaqaanaa hilibka doofaarka, halka agagaarka Hamburg ayaa ugu caansan kalluunka. Xaqiiqdu waxay tahay in hilibku uu ku jiro suxuuntooda badan, duhurkii iyo xitaa quraacda.
Cuntada caadiga ah waxaa ka mid ah qayb hilib ah, suugo shiidan, khudaar iyo biir, laakiin markaa aynu eegno suxuunta caadiga ah, kuwa aan la dhayalsan karin.
Waa a fuud hilib lo'aad dubay oo hore loogu daray khal iyo uunsi kala duwan. Waa fuud dhumuc weyn leh oo kaloriin ah oo dhaqan ahaan kaabash guduudan la siiyay iyo kuwa buraashka baradho la yiraahdo kartoffelklöbe ama baradho la kariyey, oo aad u fudud.
Hilibku wuxuu noqon karaa faras ama hilib ugaadh ah oo lagu dubay khal cad iyo xawaash dhowr maalmood. Waxay ku saabsan tahay mid ka mid ah suxuunta qaranka ee Germany oo had iyo jeer waxay ku jirtaa liiska makhaayadaha.
Waa kuwa jilbaha doofaarka waxayna inta badan le'eg yihiin madaxa bini'aadamka. Waa hilib dubay, waa ku filan ilaa maqaarku si sahal ah uga soo baxo lafta oo uu jilicsan yahay oo casiir leh oo maqaarkaas oo dhan uu yahay mid qallafsan. Waa saxan aad looga jecel yahay Bavaria.
Halkan hilibka ayaa sidoo kale lagu daraa dhowr maalmood, gaar ahaan marka la gooyey uu weyn yahay. Ka dib waxaa lagu dubay heerkul hooseeya saacado, inta u dhaxaysa laba ilaa saddex iyada oo ku xidhan xajmiga, waxaana badanaa lagu bixiyaa baradhada ama kaabajka. Munich waa el saxan.
Cuntadani waa caadiga ah ee gobolka Saxony waana duub hilib ah oo noocyo kala duwan leh. yihiin jeex dhuuban oo hilib ah oo lagu dubay ham, basasha, pickles iyo mustardKa dib markii lagu dubay khamri cas, kaas oo ka tagaya dhadhan fiican dhammaadka karinta.
Rouladen waxaa caado ahaan loogu adeegaa casho ismaris baradho ah, baradho shiidan, ama kaabaj cas. Sida saxan dhinaca, waxaad sidoo kale arki kartaa khudaarta xilliyeed, jiilaalka, dubanyada. Suugada hadhaa waa qayb muhiim ah oo ka mid ah saxanka waxaana mar walba lagu shubaa hilibka.
In kasta oo saxankani uu yahay Austrian, haddana gudaha Jarmalka waxa uu noqday mid caan ah sidoo kale. Waa cutlet lagu daboolay jajabyo rooti ah oo farmaajo iyo ham dhexda ku yaalWaa maxay sandwich, oo lagu daray baradho iyo salad cagaaran.
Maxaad ka fikirtaa isaga fuud bakayle? Haddii aad jeceshahay fuudka, Jarmalku waa adiga. Hilibku waxa uu aad ugu badan yahay wadamada uu jiilaalku dheer yahay oo adag sababtoo ah waa cuntooyin kalooriyaal badan.
Xaaladdan oo kale hilibka bakaylaha ayaa la gooyaa oo loo qaybiyaa xajmi-qaniinyo iyo soo ay ku karsadaan basasha iyo khamriga dhowr saacadood ilaa ay dhumucdo oo ay samayso fuudka. Marinade waxaa lagu sameeyay khamri iyo khal waxaana lagu sii daray dhiiga bakaylaha.
Ereyga hase waxaa loola jeedaa Jarmal bakayle, bakayle iyo pfeffer waa basbaas, inkastoo xawaashka kale iyo xawaashka ay ka muuqdaan basbaaska ka baxsan. Bavaria saxankan waxa kale oo uu ku daraa paprika basbas ama macaan,
Inkasta oo aan sheegnay in cunnooyinka Jarmalka aan lagu soo koobi karin sausages, ma joojin karno magacyadooda. Waxaa jira a dhaqanka dheer ee soo saarista sausages qaarna waa jiraan 1.500 nooc oo sausages ah. Waxaa jira takhasusyo badan oo heer gobol ah: sausage cad oo Munich ah ama sausage doofaarka leh ketchup oo caan ku ah Berlin.
sausages Caadi ahaan waxa lagu cunaa dariiqyada, waa cuntooyinka waddooyinka, laakiin waa run in ay sidoo kale saxan ka ugu adeegaan makhaayado badan oo aan waligood qaali ahayn. Sausage caadiga ah, tusaale ahaan, waa Bratwurst ama sausage la dubay.
Waa cuntada ugu caansan waddooyinka dalka: guud ahaan waxaa lagu sameeyaa hilibka doofaarka iyo hilibka lo'da oo waa la sii daayay oo leh sinjibiil, nutmeg, kolinder ama caraway, cumin. Waxa lagu dubay maqaarka qallafsan oo lagu maydhay iniin khardal ah iyo ketchup. Mararka qaarkood waxaa si fudud loogu dalban karaa rooti ama sauerkraut. Waa saxan xagaaga jarmalka caadiga ah.
Nooc kale oo caan ah oo sausage ah ayaa ah knockwurst ama bolse la kariyey. Waxaa lagu sameeyay hilibka lo'da ama hilibka doofaarka waxayna u egtahay mid weyn eey kulul. Laakiin waxaa jira kala duwanaansho sababtoo ah way ka weyn tahay eyga kulul ee caadiga ah iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin ayaa aad uga fiican. bolsekani waxa uu leeyahay midab casaan ah iyo a dhadhan qiiq khafiif ah sababtoo ah karkarinta ka dib wuu yara qiiqaa. Waxaa lagu adeegaa rooti iyo Dijon mustard.
bolse kale oo la isku dayo waa weisswurst. Waa sausage dhaqameed Bavarian ah lagu sameeyey hilib lo'aad oo la shiiday iyo ham, lagu daray dhir, liin, basasha, sinjibiil, kareem.
Guud ahaan, waxaa la bixiyaa subaxdii, sida cunto fudud, tan iyo markii lagu kariyey biyo kulul, iyada oo aan karkarin si uusan maqaarku u jabin. Kadib lagu daray pretzel leh xoogaa iniin khardal macaanhey beer cusub.
Waxaan sii wadnaa sausages: Currywurst. nooca bolse Jarmal Waxaa lagu alifay Berlin 1949kii waxaana lagu sameeyay hilibka doofaarka iyo maraqa ketchup iyo budada curry. Waxaad mooddaa in maaddooyinkaas ay bixiyeen ciidamadii Ingiriiska ee magaalada ku sugnaa markii uu dagaalka dhammaaday.
Waa la dubay oo maalmahan aad ayay caan u yihiin, waxaana jira xitaa madxaf iyaga ku saabsan. Labada Berlin iyo Hamburg labadaba waxaa la siiyaa shiilan faransiis ah waxaana lagu dhejiyaa rooti.
Sidaad aragteen baradhada ayaa aad ugu sugan gastronomy Jarmalku. Waxay dalka soo galeen dhamaadki qarnigii XNUMX-aad ilaa qarnigii XNUMX-aad aad ayay caan u ahaayeen. kartoffelpuffer waa a canjeelada baradho la shiilay, baradhada waa la shiiday oo lagu daraa dhir, basasha iyo ukunta.
Waa qaab wareeg ah waxaana badanaa lagu quraacda ukunta, ama maraqa tufaax ama labeen dhanaan.
Waxay yihiin sandwiches baradhada caadiga ah iyo Waxaa jira laba siyaabood oo loo diyaariyo: ama lagu qaso baradhada cayriin iyo la kariyey ama si toos ah baradhada la shiiday ilaa la nadiifiyo, ka dibna samee kubbado yaryar oo lagu kariyey biyo milix ah.
Waa saxan labaad oo caadi ah mararka qaarkoodna xataa waxaa lagu siidaayaa khudaar keliya. Haddii ay u socoto sidii saxan dhinaca, waxay ku daraan maraqa. Waa cunto fudud oo aad loo jecel yahay oo waxaad wax ku saabsan taariikhdeeda ka baran kartaa Matxafka Sandwich Thuringian, mid ka mid ah matxafyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay gastronomy.
Waa si fudud kaabash khamiirsan waana dalka oo dhan. Kaabashka ayaa si aad ah loo jarjaray oo khamiiray muddo dheer. Waqti dheer ayay qaadataa iyo waa wax dhanaan, waxaa sabab u ah bakteeriya oo khamiirisa sonkorta ku jirta kaabashka.
Waxa kale oo loo adeegaa sidii la socota suxuunta uu ku jiro hilibka.
Waa a saxan khudradeed, baasto ukun, oo aad looga jecel yahay kaliya maaha Jarmalka laakiin sidoo kale Switzerland, Austria iyo Liechtenstein. Waxaa lagu sameeyaa hab guri-guri ah oo lagu daray bur, kuwo cusub, milix iyo xoogaa biyo qabow ah.
Baasto ayaa markaa la gooyaa oo lagu kariyaa biyo karkaraya oo milix leh ilaa ay sabeeyaan. Waxa hadhow lagu keenaa farmaajo badan oo dhalaalay iyo in kasta oo ay noqon karto saxan lafteeda ugu weyn, waxaa guud ahaan loo adeegaa sida wehel hilib ah.
Noocan farmaajo ayaa aad uga muuqda xadka Switzerland oo uu leeyahay a dhadhan macaan leh iyo dhadhan jilicsan. Waa baruur badhkeed, subag saafi ah, waxayna leedahay a caraf udgoon.
Waa kan nooca Jarmalka ee pretzel oo taas waad arki doontaa waxa aad loogu iibiyaa wadooyinka, bakhaarada iyo suuqyada waaweyn. Way dhumuc weyn yihiin, xoogaa milix leh iyo iniin sisin ah oo kor saaran. Waxa lagu cuni karaa keligood ama iniin khardal ah.
Ugu dambeyntii, qofna ma cuni karo Jarmalka isagoon cabbin biirka. Jarmalku waxa uu leeyahay dhaqan wax-karis oo aad u wanaagsan, qarniyo badan. Noocyada Pilsner waa kuwa ugu caansan dhammaan, laakiin Gobol ama magaalo ama magaalo kasta waxay leedahay nooc u gaar ah.
Bavaria waa gobolka ugu caansan biirka oo halkan waxaad ku dhadhamin kartaa biirka qamadiga wanaagsan. Ma jiraan macmacaan Jarmal ah oo caadi ah? Haa, ee buskudka gingerbread ama lebkuchen, ka apfelkuchen ama pie tufaax, strudel leh miraha poppy, canjeelada ama kaiserschmarrn, Keega Black Forest, Keega Christmas-ka ee caadiga ah ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Alemania » Cuntooyinka Jarmalka ee caadiga ah
Waxa lagu arko Andorra 2 ama 3 maalmood gudahood